तिथि मेरो पत्रु »6चलाख विवाह लागि समयमै सुझाव!
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Nov. 25 2020 |3मिनेट पढ्न
महान् सत्य अभिव्यक्ति त्यहाँ छ, "प्रेम अन्धो छ।"
यो पनि किन बारेमा लागि खाता 50% यो U.S मा विवाह को. सम्बन्ध विच्छेद मा अन्त.
अज्ञानता थुप्रै क्षेत्रमा आनंद प्रदान तापनि, जीवनको लागि एक साथी लिएर तिनीहरूलाई एक होइन. के तपाईं थाहा छैन दैनिक नाटक गर्न सक्छ, तनाव, गरिब स्वास्थ्य, अपूर्ण अपेक्षालाई, दुःख, र अन्ततः ... सम्बन्ध बिगारे.
तर सुसमाचार त्यहाँ.
तपाईं आफ्नो भविष्य संग सम्बन्ध roulette खेल्न छैन. यो आफ्नो प्रेम कथा सुखी अन्त लेख्न सम्भव छ, तपाईं Wed अघि तपाईं अगाडी सोच्न भने.
यो लेख यस उद्देश्यका लागि लक्षित छ.
यी ठहर र सिफारिस थुप्रै असल ole 'साधारण अर्थमा आधारित छन्, अनुभव र तर्क. अरूले पनि हिट वास्तविकता शो को शिष्टाचार हो, Bridezilla.
यहाँ आफ्नो प्रेम बुद्धि वृद्धि गर्न थाह हुनुपर्छ केही कुराहरू छन्.
6 चलाख विवाह गर्न सिद्धान्त र आचरण:
1. भङ्ग छ जो ठीक छैन विवाह पहिचान.
यो सही हो. म यहाँ एक "डेबी कारवां" हुन घृणा; तर यो सत्य हो. रिस व्यवस्थापन विषयहरूमा, बाल्यकाले, जुवा खेल्ने, स्वार्थ, सम्बन्ध एक वैवाहिक स्थिति उच्च छ किनभने र सपिङ्ग दुर्व्यसनहरूमाथि बस ठीक हुनेछैन. दुर्भाग्यवश, एक जोडीलाई मा लिएर एक "छ रूपमा" खरीद खरीद जस्तै धेरै छ. जे अवस्था, यो अब तपाईंकै हो. खरीदार गरेको पछुतो जोगिन ध्यान छान्नुहोस्.
2. Opposites आकर्षित तापनि, कोर commonalities संग जोडे अब पछिल्लो गर्छन.
कसैले आफूलाई एक कार्बन प्रतिलिपि विवाह गर्नुपर्छ. यो पट्यारलाग्दो हुनेछ, र वृद्धि र उत्साह को बाटो मा सानो प्रदान. तैपनि, तपाईं को दुई साधारण मा हुनु पर्छ निश्चित कुराहरू छन्. यो आफ्नो लक्ष्य समावेश थियो, आफ्नो मूल्य प्रणाली, र कम से कम एक वा दुई गतिविधिलाई वा सोख. यहाँ विचार गर्न थप केही क्षेत्रहरू हुन्: कसरी धेरै बच्चाहरु तपाईं को दुई चाहनुहुन्छ? बिग विवाह वा सानो? घर वा अपार्टमेन्ट? यहाँ विचार प्राप्त?
3. तपाईं आफ्नो इमेल जाँच गर्न छ भने, आफ्नो सामाजिक मिडिया खाता मा तोड, वा आफ्नो फोन स्क्रीन, "हस्टन एउटा समस्या छ।"
कुनै पनि दीर्घकालीन को सफलता, गम्भीर सम्बन्ध भरोसा मा बनाएको छ. अनि त तपाईं यो छ या तपाईं छैन. केही मान्छे त्यहाँ भने केही लुकाउने कि संघर्ष तापनि, तिनीहरूले आफ्नो जोडीको खातामा carte BLANCHE अतिरिक्त छ सक्षम हुनु पर्छ. जरूरी छैन–सबैलाई गोपनीयताको एक डिग्री योग्य. फेरि, भरोसा अत्यावश्यक छ! त्यो पाठ्यक्रम छ, आफ्नो साथी छलछाम को एक इतिहास छ, जब सम्म. त्यो अर्को समय मा अर्को लेखमा छ.
4. तिमी छलांग अघि "गहिरो हेर,"न्यायाधीश Mablean सधैं उनको लोकप्रिय टिभी अदालती शो मा भन्न प्रयोग. अनि यो एउटा पाठ लायक पालन गर्दा हो.
के तपाईं "कुचो हाम फाल्ने" अघि अन्य व्यक्ति जान्न आवश्यक समय निकाल्नुपर्छ. सँगै केहि समयसम्मको अनुभव. त्यो / त्यो तनावको समयमा व्यवहारले हेर्नुहोस्, राम्रो र नराम्रो दुवै समयमा, रोग र स्वास्थ्य समयमा, इष्टतम परिणाम लागि.
5. उचित दृष्टिकोण प्राथमिकता राख्नुहोस्.
प्रत्येक हप्ता Bridezilla, दर्शकहरु केही बरु हास्यास्पद निर्णय स्मार्ट मान्छे साक्षी. तिनीहरूमध्ये एक नगर्नुहोस्. यहाँ एउटा उदाहरण छ. एक दुलही खर्च हुनेछ $60,000 एक विवाह मा, उनले बनाउने ठाउँ जागिर धारण तापनि $24,000 एक वर्ष. ती दम्पतीलाई, फलस्वरूप, आफ्नो पीठ मा ऋण चढ्न को भारी आफ्नो यूनियन बाहिर सुरु. या पहिलो केही वर्षसम्म आफ्नो सासू-बस्दै. सुन्दर छैन. के तपाईं सम्बन्ध विच्छेद को प्रमुख कारणहरू मध्ये एक आर्थिक छ भनेर थाह थियो? एक विवाह सिर्फ एक दिन छ कि सम्झना, विवाह सधैंभरि हुन लक्षित छ, जबकि. यो प्राकृतिक हो तापनि एक दुलही उनको विशेष दिनमा एक "राजकुमारी" जस्तै महसुस गर्न चाहनुहुन्छ लागि, त्यो जस्तै खर्च हुँदैन "रोयल्टी।"
6. रोमांटिक समीकरण मा कारक धर्म.
एक आध्यात्मिक जग राख्दा जीवनको आँधीबेहरी मौसम मदत गर्न सक्छ, र कठिन समयमा बल र निर्देशन दिन.
Wedded आनंद को धेरै वर्ष को लागि विवाहको यी छ प्रमुख नियम पालन.
के महिला सेक्स समयमा बारे सोच्नुहोस्